Ciidamada dawladda Soomaaliya ee Baladweyne oo weerarro iska caabbiyey - Sabahionline.com
Ciidamada dawladda Soomaaliya ee Baladweyne oo weerarro iska caabbiyey Maarso 25, 2012
Ciidamada dawladda Soomaaliya ee ku sugan Beledweyne oo gobollada dhexe ka mid ah ayaa Jimcadii (23-ka March) iyo Sabtidiiba iska caabiyey weerarro uga yimid dhinaca dagaalyahaniinta al-Shabaab, SONNA ayaa werisay. Qodobbo la xiriira
Ahlu Sunna wal Jamaaca oo soo dhawaysay in AMISOM tagto bartamaha Soomaaliya
Ciidamada Soomaliyeed oo dagaalyahaniinta al-Shabaab ku booriyey in ay soo baxsadaan
Ciidamada Dawladda FKMG ah ayaa u babac-dhigay weerarrada oo lala beegsaday xero ciidan iyagoo halkaa ku diley afar al-Shabaab ah, sida ay sheegtay wakaaladda SONNA. Weerarrada ka dib ayay ciidamadu aagagga Baladweyne u dhaw ka sameeyeen hawlgallo nabadgelyo oo ay habeenkii dagaalyahaniin uga qab-qabteen magaalooyinka iyo tuulooyinka ku yaal agaggaarka Beledweyne. Beledweyne oo ah caasimadda gobolka Hiiraan ayay dawladdu gacanta ku haysay ilaa November, 2011-kii.
March 25, 2012 @ 08:52:48PM
Waxaan filayaa in ciidamada Afrika ay si fiican ugu guuleysanayaa waajibaadkooda ammniga. Qof kasta wuxuu sidoo kale aamin sanyahay in ciidamada booliska Soomaaliya ay ka soo dhalaaleen mas'uuliyaddooda iyo in ay ilaaliyaan nabadda iyo xasiloonnida kajirta Soomaaliya ayagoo ka soo hooyay guulo isdaba joog ah haraaga kooxda argagaxisada ee Al-shabaab. Iyagoo taa ka jawaabanaya, kooxdan argagaxisada ah waxay caradooda ku biya shubatay in ay ka aar-gutaan dadka Soomaalida masaakiinta ah ee waddankooda noqday mid ka mid ah goobaha adduunyada ugu halista badan.